Topy maso / fitaovana | Ota Bunkanomori
9: 00-19: 00 (zoron'ny boky sy zoro multimedia)
· Ny Alakamisy faharoa isam-bolana (raha fety, ny zoma manaraka)
· Fialantsasatry ny faran'ny taona sy ny taom-baovao (12 Desambra-29 Janoary)
· Fotoana fandaminana manokana (ao anatin'ny 1 andro isan-taona)
Torohevitra mivantana mivantana telefaona mivantana 03-3772-0740
Ity zoro ity dia manana ny asany mitovy amin'ny Ota Ward Library, miaraka amin'ny boky, magazine, CD, ary fitaovana mifandraika amin'ilay faritra.
Ahoana ny fomba mindrana fitaovana voalohany
"Karatra Oash Ward Library Kashidashi mahazatra" no takiana.
Izay monina any Ota Ward na manana zotra hiasa na hianatra any Ota Ward dia afaka mampiasa izany.
Hisoratana anarana dia angatahina ianao haneho mari-pankasitrahana (fahazoan-dàlana hamily fiarakodia, karatra olona miantoka fiantohana ara-pahasalamana, karapanondro ho an'ny mpianatra, sns.) Miaraka amin'ny anaranao sy ny adiresinao hanamarinana ny mombamomba anao.
Ireo izay efa nahavita azy tao amin'ny Tranomboky Ota Ward dia afaka mampiasa azy io koa ao amin'ny hotely.
Momba ny fampindramambola
Isan'ny indram-bola: Hatramin'ny boky 12, magazine, fampisehoana tantara an-tsary. CD hatramin'ny 6.
Fotoana fampindramam-bola: hatramin'ny 2 herinandro
Isan'ny seza jerena
Gazety gazety / magazine
Seza 34 (anisany seza 5 laharam-pahamehana PC ary seza azo ampiasaina 11 PC)
Momba ny fitaovana miverina rehefa mikatona ny tranombakoka
Ampiasao azafady ny "poste miverina".
* Azafady avereno mivantana ireo fitaovana naterina tao amin'ny tranomboky teo ivelan'ny paroasy teo am-baravarankelin'ny tranomboky fanofana.
Raha te-hitady fitaovana ianao dia ampiasao azafady ny terminal solosaina ho an'ny mpampiasa.
Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay fa afaka manampy anao izahay.
Raha tsy manana ny fitaovana tadiavinao ianao dia afaka manao famandrihana na manafatra azy ireo avy ao amin'ny tranombokin'ny paroasy.
Afaka mikaroka sy mitahiry fitaovana ianao ary manamarina ny mombamomba anao manokana amin'ny Internet.
For detailsHomepage an'ny Ota Ward Library Jereo azafady
Azonao atao ny miaina hetsika mamorona toa ny fandidiana solosaina tsy miova, famoronana antontan-taratasy, Internet, famokarana sary, ary fanovana sary / horonan-tsary.
Fenoy azafady ny takelaka fangatahana ary asehoy ao amin'ny fandraisana ny "Karda iraisan'ny Library Ota Ward".Ny mpihaino kendrena dia voafetra ho an'ny mpianatra ambaratonga voalohany ihany.
Isaky ny zoro
Zoro traikefa (fiara 14)
Azonao atao ny miaina ny fikirakirana ny solosaina fototra, ny lozisialy amin'ny birao toa ny Word sy Excel, ary ny rindrambaiko mianatra toy ny Go / Shogi ary rindrambaiko manoratra.
1 ora maimaim-poana.Afaka manohy mampiasa azy ianao raha maimaim-poana.
Joro Internet (singa 6)
Afaka miaina mizaha ny pejy fandraisana ianao.
Ny fampahalalana toy ny mailaka sy ny hafatra SNS dia tsy azo alefa.
Maimaimpoana ny 30 minitra voalohany, ary 30 yen kosa ny 100 minitra sisa.
Zoro fanaovana hetsika (singa 2)
Amin'ny alàlan'ny famaritana ny booth isaky ny Win sy Mac dia azonao atao ny manao hetsika famoronana toy ny famokarana sary sy ny fanovana sary / sary.Word, Excel, Photoshop ary Illustrator no ampidirina.
Ho 2 yen izany ao anatin'ny 200 ora.
Azonao atao ny manonta azy. (A4: Monochrome 10 yen, loko 30 yen)
Azo ampiasaina ny fahatsiarovana USB. (Azafady mba asio scan virus amin'ny fandraisana alohan'ny hampiasana azy)
Tsy misy mpampianatra manazava ny fandidiana. (Ampiasao azafady ny lahatsoratra omena)
Natsangana izy io ho an'ny tanjona amin'ny fanomezana serivisy fifandraisana Internet mba hanohanana ny fikarohana sy ny fianarana ho an'ireo izay mampiasa ny foibem-baovao.
Ity Wi-Fi ity dia azo alaina mandritra ny ora fisokafan'ny zoro famakiam-boky sy ny zoro multimedia.
Raha manana tobim-pifandraisana afaka mifandray amin'ny LAN tsy misy tariby ianao dia azonao ampiasaina maimaim-poana.
Fitandremana momba ny fampiasana
Raha hampiasa ny serivisy dia mila manaiky ny fepetra amin'ny serivisy ifandraisana amin'ny Wi-Fi maimaim-poana ao amin'ny japoney ianao.
Ny Wi-Fi dia tsy voafafa tsy misy tariby mba hahafahanao mampiasa azy mora foana. Azafady mba ampiasao amin'ny alàlan'ny risikao manokana ny serivisy, toy ny tsy fampidirana ny mombamomba anao manokana toy ny karapanondro, tenimiafina, carte de crédit, sns.
Mety tsy misy ny serivisy noho ny fikolokoloana fitaovana sns.
Rehefa mampiasa an'ity serivisy ity dia tsy tompon'andraikitra amin'ny hotely ny trano fandraisam-bahiny na olana amin'ny antoko fahatelo.